हामी किन बिर्सिन्छौं ?
हरेक विद्यार्थीलाई लाग्छ, एकपटक पढेको या कण्ठ गरेको पाठ कहिल्यै नबिर्सियोस् । व्यापारीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, लेनदेनको हिसाब-किताब दिमागमै रहिरहोस् । शिक्षकलाई लाग्छ, विद्यार्थीलाई सिकाउने पाठ सधैं कक्षामा फरर आओस् । धर्मगुरुहरू पनि यही चाहन्छन्— पुस्तक नहेरी भक्तजन सामु प्रवचन दिन सकियोस् ।
तीन सय वर्ष अगाडिका भविष्यवेत्ता तथा दार्शनिकहरूले भन्ने गरेका थिए, मानिसको संख्या यसरी नै बढिरहन्छ र अनिकालले मानिसको जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । उनीहरूले अनुमान लगाएकोभन्दा तीव्र गतिमा जनसंख्या वृद्धि हुँदै गयो । तर त्यस्तो भोकमरी लागेन । जीवन जति दुःखी र कष्टकर होला भन्ने सोचिएको थियो, त्यस्तो भएन । उल्टै सजिलो भएको छ ।
विषादीले किराहरूबाट तरकारी, अनाजलाई बचाएर मानिसलाई लाभ दिएको छ तर यसले पार्ने दूरगामी असरबाट सिंगो जीवजगत छटपटाएको छ ।
जैविक घडीको भर
हिउँदमा बिहान उठ्न गाह्रो लाग्ने कारण जाडो मात्र होइन, अर्को कारण पनि छ –उज्यालो ढिलो हुनु । उज्यालो ढिलो हुनाले निद्रा नभाग्ने वा शरीरमा जाँगर नभरिने अर्को भित्री कारण छ । त्यो हो– मेलाटोनिन हर्मोन । यो हर्मोन उज्यालोको अनुपस्थितिमा जीउमा उत्पादन हुन्छ, जसले निद्रा लगाउँछ ।
बाँदर बसोबास गर्ने सहर प्रशस्तै छन् । काठमाडौं, पोखरा, धरान लगायतका अधिकांश सहरमा बाँदरको प्रकोप हुनथालेको छ । बाँदर जंगली जनावर हो । तर आजकाल यो सहरिया भएको आभाष भइरहेको छ । विराटनगर जंगलविहीन पक्की सहर हो ।
हात धुनका गाह्राले वा धुने वातावरण नभईकन खानुपर्ने स्थिति आए भनिन्छ— आफ्ना हात जगन्नाथ । आशय हो, हात आफ्नै हुन्, सफा र पवित्र छन् । वैज्ञानिक हिसाबले भने यो स्वीकार्य छैन । बरु वैज्ञानिक उखान बनाउन सकिन्छ— आफ्ना हात : कीटाणुका खात ।
सिंगो देशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको तयारी गरिँदै छ । टोल, गाउँ, स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियान दुई दशकदेखि चल्दैछ । कुकुरको दिसालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने मानवको मलमूत्र व्यवस्थापन हुँदैमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र बन्न कसरी सक्छ ?
कसैलाई नराम्ररी भन्नुपर्‍यो भने मानिसले ‘पेटमा किरा परोस्’ भन्छन्  । तर पेटमा किरा परोस् भन्नु आशिर्वाद पनि हुनसक्छ  । उसो त पेटमा किरा नभएको मानिस छँदै छैन । जन्मेर दुई वर्षको भइसक्दा मान्छेको पेटमा किराले घर जमाइसकेका हुन्छन् । यहाँ किरा भन्नाले जुका र प्राटोजोआ, ब्याक्टेरिया, भाइरस फन्जाईजस्ता सूक्ष्मजीव हुन् ।
माकुरीको जाल निकै शक्तिशाली हुन्छ । मायाप्रेमले यसलाई आदर्श सामग्री मानेको छ । के माकुरीको जालो बलियो होला ? वैज्ञानिक पनि विश्वस्त भएका छन्– माकुरीको जाल निकै बलियो हुन्छ । उत्तिकै ब्यास भएको स्टीलभन्दा जालोको त्यान्द्रो दह्रो हुन्छ ।
कुनै काम गर्छु भन्दै थाती राख्दै गइयो भने भनिन्छ– ‘छेपाराको कथा’ । कुनै राजनीतिक, धार्मिक वा अन्य प्रकारको आस्थामा परिवर्तन गरिरहनेलाई छेपारे प्रवृत्ति या ‘छेपाराले रंग बदलेझैँ’ भन्ने गरिन्छ । नेपाली लोकगीत, लोककथा अनि दन्त्यकथाका पात्रका रूपमा छेपारा आउने गरेका हुन्छन् ।